खानपीनबाट हुने फुडपोइजन बाट बच्ने उपायहरु | | Uwjalkhabar
UjwalKhabar - Nepali latest News
खानपीनबाट हुने फुडपोइजन बाट बच्ने उपायहरु
By ujwal khabar	 Last updated Oct 30, 2020
फुडपोइजन भन्नाले साना अपच भएर हुने झाडावान्ता हो । फुडपोइजन विशेष गरि असन्तुलिन खानेकुरा खाने बनिले गर्दा हुने गर्छ । फुडपोइजन धरैजसो मान्छेलाई चाडबाडमा हुने गर्दछ । हामीले सकेसम्म ठिक्क खानेकुरा खाएर यसबाट बच्नु सक्नू पर्छ ।
फुडपोइजन मुख्य त ब्याक्टेरियाका कारणले हुने गर्छ । यो विभिन्न किसिमका इकोली, सालमोनेला जस्ता ब्याक्टेरिया संक्रमणका कारण हुने गर्छ । धरैजसो माछामासु, अन्डा र डेरी पदार्थमा यस्ता ब्याक्टेरियाहरुको छिट्टै संक्रमण भेटिन्छ । हामीले यस्ता खानेकुरा खादा निकै सावधानी अपनाएर खानु पर्छ ।
यसैगरी, बसी, सडेको, केमिकलयुक्त खानेकुरा, प्रदुषित पानी प्युदा, हात नधोई खान पकाउदा/खाँदा, रंग मिसिएको खानेकुरा खाँदा, जंगफुड लगायत केमिकलयुक्त प्याकेटको खानेकुरा खादा पनि फुडपोइजन हुने गर्दछ ।
फुडपोइजन हुदाको थुप्रै लक्षण हुने गर्छन् । भोक नलाग्ने, थाकेको महसुस हुने, झाडापखाला लाग्ने, पेट दुख्ने, टाउको दुख्ने, कामजोरी महसुस हुने जस्ता लक्षण देखिए फुडपोइजन हुनसक्ने सम्भावना हुन्छ । यस्तो लक्षण देखिन थाले हामीले ढिला नगरी यसबाट बच्ने उपायहरु अपनाउन थाल्नु पर्छ ।
हामीले सकेसम्म सावधान भएर खानेकुराको सेवन गर्नुपर्छ र एदी फुडपोइजन भइहाल्यो भने तुरुन्त स्वास्थ जाच गराउनु पर्छ । यसबाट हामीले बच्न थुप्रै उपायहरु अपनाउन सक्छौं । यसबाट बच्ने उपायहरु यस प्रकार छन्:
सबै फलफुलहरु मज्जाले सफा पानीले पखालेर मात्र खाने गर्नुपर्छ ।
छुट्टा छुट्टै खानेकुराको सेवन एकै चोटी धरै मात्रामा नगर्ने ।
खानेकुराहरुमा झिगा भन्किरहेको छ भने तेस्त खानेकुरा नखाने ।
खानकुरा पकाई सकेपछि मज्जाले छोपेर राख्ने बनि बसाल्नु पर्छ ।
केमिकलयुक्त, पेयपदार्थ , प्याकेटका कह्नेकुरा जस्ता अवास्थ्य खानेकुरा धेरै नखाने ।
माछामासु पकाए पछि धेरैबेरसम्म राखेको माछामासु नखाने ।
असुद्ध पनि नप्युने । मज्जाले उमालेको पनि र फिल्टर गरेको पनिमात्र प्युने गर्नुपर्छ ।
समय समयमा हात धोईराख्ने ।
माछामासुको लागि छुट्टै कटिंग बोर्ड बनाउने ।
खानेकुरा मज्जाले पाकेपछि मात्र खाने । माछामासु मज्जाले पकाएर मात्र खाने । काँचो नखाने ।
डेट याक्सपायर भएका खानेकुरा नखाने । खानेकुरा खानु अघि डेट याक्सपायर समय हेर्ने ।
काँचो मासु अरु खानेकुराहरु भन्दा छुट्टै राख्ने ।
अत: फुडपोइजनबाट बच्ने उपायहरु यस प्रकार छन् । हामीले यी उपायहरु लाई ध्यानमा राखेर सहि तरिका अपनायौ भने फुडपोइजन जस्तो बिमारीबाट बच्न सक्छौं । धरै जसो फुडपोइजनको समस्या चाडवाडमा देखिने भएकोले त्येस्ता चाडवाडको झन बेसी सतर्कता अपनाउनु पर्छ । स्वास्थ्य खाने कुरा खाऔँ र सकेसम्म फुडपोइजन हुनबाट बचौं ।
ujwal khabar 57 posts0comments
शरीरको पाचन शक्ति बढाउन यी खानेकुरा खाऔँ
आफ्नो अनुहारको चमक बडाउन यी घरेलु उपाय अपनाउनुहोस्
शुगर लेभल कन्ट्रोल गर्नको लागि अपनाउनुस् यस्ता घरेलु उपाय
यी उपाय अपनाउनुहोस् र एसिडिटी भगाउनुहोस् !
हर्निया भनेको के हो ? जान्नुहोस् यसका लक्षण र उपचार
आँखाको हेर्ने शक्ति बढाउन यी टिप्सहरुको प्रयोग गरौँ
© 2020 - Uwjalkhabar. All Rights Reserved.
All Rights Reserved with Ujwal khabar media Pvt.Ltd. Ujwalkhabar